Diacerein - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Diacerein
Generic Name: Diacerein Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Diacerein ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Diacerein ဟာ anthraquinone အုပ်စုဝင်ဆေးတမျိုးဖြစ်ပြီး အရိုးနဲ့အဆစ်ပျက်စီးခြင်းရောဂါများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အရိုးနဲ့အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းများနဲ့ တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ နာကျင်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကို သက်သာစေဖို့ ဒီဆေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ နှေးကွေးစွာ အာနိသင်ပြတဲ့အတွက် အရိုးနဲ့အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါကို ရေရှည်ကုသရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Diacerein ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
ဆေးကို အစာရှိချိန်မှာသောက်ရမှာဖြစ်ပြီး တနေ့နှစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ့ ၂ – ၄ ပတ်တိတိ သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ အစာနဲ့တွဲဖက်သုံးစွဲရင် သွေးအတွင်းသို့ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း ၂၅%ထိ တိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Diacerein ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Diacerein ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Diacerein ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Diacerein ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Diacerein ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Diacerein ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေ၊ဆရာဝန်ဆေးစာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ဆေးတွေ (ဥပမာ ဗီတာမင်အားဆေးတွေ၊သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုကတဆင့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အားဖြည့်ဆေးဝါးတွေ စသဖြင့်)အကြောင်းကိုသာမက သင့်မှာနဂိုရှိပြီးသား ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေ၊ရောဂါတွေအကြောင်းနဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ(ဥပမာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း၊ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန်ရှိခြင်း စသည်)ကို ဆေးမသုံးစွဲခင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောထားရပါမယ်။ အချို့သော ရောဂါအခြေအနေတွေဟာ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သို့မဟုတ် ဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာသုံးစွဲပါ။ သုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏကတော့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ သင့်ရောဂါအခြေအနေ ပိုဆိုးလာရင် ဒါမှမဟုတ် တိုးတက်လာခြင်းမရှိရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
သင့်ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုရင် ဒီဆေးကို သတိထားပြီး သုံးစွဲပါ။
ဒီဆေးဟာ စတင်သုံးစွဲပြီး ၃လလောက်ကြာမှ ထင်သာမြင်သာအရှိဆုံး အာနိသင်ကိုပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆေးသုံးစွဲနေစဉ်ကာလတလျှောက်လုံးမှာ သွေးဆဲလ်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ဆီးစစ်ခြင်းတို့ကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
အသည်း ဒါမှမဟုတ် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့လည်း သတိပြုသုံးစွဲရပါမယ်။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် Bရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
Diacerein က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Diacerein နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Diacerein ဟာ အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
Diacerein ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Diacerein နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Diacerein က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Diacerein နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Diacerein ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Diacerein ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
၅၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ရပါမယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Diacerein ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Diacerein ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Diacerein ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Diacerein ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 28, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 18, 2019